Naya Bikalpa | राजनीतिक कर्मीद्वारा झापामा करको वहस - Naya Bikalpa राजनीतिक कर्मीद्वारा झापामा करको वहस - Naya Bikalpa
राजनीतिक कर्मीद्वारा झापामा करको वहस
प्रकाशित मिती: २०७५ भाद्र ५, १०: ०४: ३३
झापा । झापा जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कर बृद्धि नगरेको बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको स्थानीय तहमा कर विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्र शेर्माले करका बारेमा अनावश्यक भ्रम फैलाइएको बताए ।
स्थानीय तहको विरुद्धमा करलाई हतियार बनाउन खोजिएको उनको भनाई छ । साइकलमा कर लगाइएको भन्ने चर्चा गलत भएको र साइकलमा नभई व्यवसायमा कर लगाएको समेत बताए ।
करलाई विषय बनाएर समाजका जान्ने बुझ्नेले सर्वसाधारण नागरिकलाई भ्रमित बनाएको आरोप लगाएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी सबै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले कर बृद्धि नभई केहि शिर्षकमा सामान्य फेरवदल भएको बताएका छन् । जनप्रतिनिधिले करका बारेमा असामान्य अफवाह फैलाइएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले करका बारेमा भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।
हरेक स्थानीय तहले राजश्व निर्धारण गर्नुपूर्व विज्ञ र स्थानीय नागरिकको परामर्शबाट कर निर्धारण गरिएको बताएका छन् । स्थानीय तह बन्नुभन्दा पहिले नै लागु भएका अधिकांश कर कायम गरिएको जनप्रतिनिधिको भनाई छ । अधिकांश स्थानीय तहमा व्यक्तिगत घटना दर्ता निःशुल्क गरिएको पाइएको छ । ३५ दिनपछि दर्ता गरेका न्यूनतम ५० बढिमा १५० जरिवाना लिइएको बताइएको छ ।
बाह्रदशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग बहादुर राजवंशीले सबै स्थानीय तहले आगामी वर्षबाट कर निर्धारणमा एकरुपता गर्नुपर्ने बताए । आफ्नो गाउँपालिकामा करको कुनै विरोध नभएको जानकारी दिए । स्थानीय तहबीच करमा अन्तर भएकाले नागरिकको विचमा गलत सन्देश गएको उनको धारणा थियो ।
यसैगरी हल्दिवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङ्देनले नागरिकलाई करका बारेमा बुझाउन नसकिएकोले अनावश्यक भ्रम फैलिएको बताए । उनले कर के हो ? किन उठाइन्छ ? कसको लागि उठाइन्छ ? भन्ने विषयमा नागरिकलाई बुझाउनु पर्ने बताएका छन् । जनप्रतिनिधि जनताको गोठालो हौ, ? – भ्रम चिर्न नागरिकलाई बुझाउनै पर्छ ।
कर निर्धारण प्रक्रिया,करको दर र करको सार्वजनिकिकरणका बारेमा जनप्रतिनिधिले जानकारी गराएका थिए । झापामा व्यक्तिगत घटना दर्ता, बहाल करमा एक रुपता पाइएको छ ।
दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले कर बृद्धि बाहिर चर्चामा भएजस्तो नभई हल्ला मात्र भएको बताएका छन् । उनले अनावश्यक चर्चाको साटो दिएको सुविधाको चर्चा हुनु राम्रो भनेका छन् । स्कुल बस र शव बहानलाई करमा छुट दिएको उनको भनाई छ । कानुनी प्रक्रियामा आउने नागरिकले थप सुविधा पाइरहेको बताए । सुत्केरीलाई २ हजार सुविधा दिन थालिएको सुनाएका छन् ।
गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलले बाहिर चर्चामा आएको विषय भन्दा तथ्य फरक रहेको बताए । एक प्रशंगमा उनले भने, सच्याउनै पर्ने विषयमा सच्याउन सकिने छ ।
समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले करका बारेमा नागरिकलाई सहजीकरण गरिने बताएका छन् । उनले करका बारेमा भ्रम फैलाइएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रमबाट निष्कर्ष निकाल्दै उनले संकलित कर सार्वजनिक गर्ने समेत बताएका छन् ।
लमजुङ केन्द्र भएर आज बिहान ५.३ म्याग्निच्युडको भूकम्पकाे धक्का
२०७५ भाद्र ५, १०: ०४: ३३
नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- लमजुङको भुलभुले केन्द्र भएर आज बिहान ५.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएकाे छ । भूकम्पको धक्का पोखरा, तनहुँ, गोरखा,...
बालबालिकालाई कोरोना खोप लगाउने ब्यावस्था गर्ने देउवाकाे आग्रह
नयाँ विकल्प, काठमाडाैं-नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोनाको तेस्रो लहर आउने र त्यसबेला बालबालिका धेरै प्रभावित हुने विज्ञहरूले बताइरहेकोले सरकारले...
नयाँ बिकल्प,काठमाडौं । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भने झैं देशमा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट दैनिक दुई सयको हाराहारीमा नेपाली...